ယခုလအတွင်း မိုးရွာသွန်းပြီး ဆားကျင်းများ ပျက်စီးမှုကြောင့် ဆားထုတ်လုပ်မှုကို ဖေဖော်ဝါရီလတွ? - Yangon Media Group
ယခုလအတွင်း မိုးရွာသွန်းပြီး ဆားကျင်းများ ပျက်စီးမှုကြောင့် ဆားထုတ်လုပ်မှုကို ဖေဖော်ဝါရီလတွ?
မော်လမြိုင်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆
မွန် ပြည်နယ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် က မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှု ကြောင့် ဆားကျင်းများပျက်စီးခဲ့ သဖြင့် ဆားကြမ်းထုတ်လုပ်မှု တစ်လခန့်နောက်ကျနိုင်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ်မှ ဆားထုတ်တောင် သူများထံမှ သိရသည်။ ဆားလုပ်ငန်းကို မူလက မိုး အကုန် အောက်တိုဘာလလောက် တွင် ဆားကွင်းစတင်ပြင်ဆင်ပြီး နိုဝင်ဘာလတွင် ပင်လယ်ရေတင် ပြီး နေလှန်းကြကြောင်း၊ ရာသီဥ တုကောင်းမွန်ပါက ဒီဇင်ဘာလ အကုန် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဆား ကြမ်းများထုတ်လုပ်ကြောင်း၊ သို့ သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ရာသီဥ တုကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသဖြင့် ဆား ကြမ်းထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဖေဖော်ဝါရီ လမှ စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း ဆားထုတ်တောင်သူများ က ပြောသည်။
”ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က မိုးရွာ လိုက်တော့ ဆားကွင်းတွေပျက်စီး ကုန်တယ်။ ဆားကွင်းထဲမှာရေ တွေပြည့်ကုန်တယ်။ ရေတွေပြန် ထုတ်ရမယ်။ ကွင်းပြန်ပြင်ရမှာနဲ့ ဆိုရင် ဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှ စလုပ်နိုင်မယ်”ဟု ပငကျေးရွာမှ ဆား လုပ်ငန်းရှင် နိုင်ဘရှိန်က ပြောသည်။
ယမန်နှစ်က ဆားလက်ကျန် များမရှိသလောက် ဖြစ်နေခြင်းနှင့် ဆားအထွက်နောက်ကျခြင်းတို့ ကြောင့် ဆားကြမ်းဈေးများမြင့် တက်လာနိုင်ကြောင်း ဆားလုပ် ငန်းရှင်များက ပြောကြားသည်။ ”မိုးမရွာခင်တုန်းက ဆားဈေး တစ်ပိဿာကျပ် ၁၉ဝ ရှိတယ်။ အခုတော့ အရောင်းအဝယ်သိပ် မရှိဘူး။ ဆားများများမရှိတော့ ဈေးမခေါ်ရဲဘဲ ငြိမ်နေကြတယ်။ ဆားသာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ တစ် ပိဿာကျပ် ၂ဝဝ ကျော်ကျော် လောက်ရနိုင်တယ်”ဟု သံဖြူဇရပ်မှ ဆားလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ဆား ကွင်းဧကပေါင်း ၅ဝဝဝ ခန့်ရှိသော် လည်း ဆားကွင်းဧက ၃ဝဝဝ ကျော်သာ ဆားထုတ်လုပ်မှုရှိကြောင်း၊ ဆားထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးမှာ သံ ဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ရေးမြို့နယ်နှင့် ပေါင်မြို့နယ်တို့တွင် အများဆုံး ထုတ်လုပ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ် မြန်မာ့ဆားနှင့်အဏ္ဏဝါဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ သိရသည်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း က အဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့သည့် မိုးကြောင့် မွန်ပြည်နယ်မှ ဆားကွင်း နှင့်ဆားဂိုဒေါင်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံး ခဲ့ကြောင်း ဆားထုတ်လုပ်သူများ ထံမှ သိရသည်။
လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြန်လည်ရရှိရေး ကလေးဒေသခံ တောင်သူတို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်